City in Togdheer, SomalilandTemplate:SHORTDESC:City in Togdheer, Somaliland
Buuhoodle (Somali: Buuhoodle, Carabi: بووهودل), waxay ahayd caasimadda koowaad ee Darawiish ee ku taalneed Dareemo Caddo (1896 - 1897). Caasimadda Daraawiish ee labaad wuxuu ku yaalay Sacmadeeqa (1898 - 1899). Labo Degmo ayaa ku yaal hareeraha Buuhoodle, waa na Dareemo Caddo iyo Sacmadeeqa. Caasimadda Darwiish ku xigeenka waxay ahayd Weylahed (sanadka 1900). Maanta waxaa ka mid tahay Buhoodle Gibolka Togdheer EE wadanka Somaliland.
Magaalada Buuhoodle, saddexaadkeed wuxuu ku yaala Ogadenia, ama kilinka shanaaad. Waana magalada ee ugu dadka badan Dhulbahante marka laga tago Laascaanood iyo Marqaanwayne, iyo hareeraha Fiqifuliye.
Daraawiishta[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Waa meel caan ah oo xuddun u ah dhaqdhaqaaqa alaabada ka imaanaya gobolada Somalia iyo gobolka Somali Galbeed. Degaanka ku hareereysan ayaa hodan ku ah xoolaha iyo beeraha oo soo kordhay. Waxay leedahay dugsiyada hoose, dugsiyada sare iyo jaamacadaha. Buhoodle waa magaalo dhexdhexaad ah oo leh xarumo caafimaad, isbitaallo, koronto iyo dhammaan goobaha laga rabo magaalada. Waxaa muuqata in uu yahay goobtii aabe ee aabaha Ummadda Soomaaliyeed, Ismaaciil Mire.
Guudmarka Reer Darwiish[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Buuhodle waa magaalada caasimadda ah ee gobolka cusub ee Cayn. Gobolka wuxuu ka kooban yahay Degmada Buhoodle, oo horey uga tirsanaa gobolka Togdheer. Gobolka Aasi waxaa ka mid ah degmooyinka kale sida Widhwidh, Ceegaag, Horufadhi, Sool Joogto, Megagle, balicad, sarmaan,dandan, goljano, yeyle, xadhadhan, coodanle, qararo, bali-hadhac iyo kuwo kale.
Xuduudki Reer Darwiish[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Buhoodle wuxuu ku yaallaa xudduudka u dhaxeeya Somaliland iyo Itoobiya. Waxay u adeegtaa xarun ganacsi oo loogu talagalay dhaqdhaqaaqa alaabooyinka u socda Boosaaso, Garoowe, Laascaanood, Gaalkacayo, Wardheer, Burao, agagaarka agagaarka ah, iyo Ogaden. Magaaladu waxay hodan ku tahay xoolaha iyo sidoo kale beeraha, waxayna si weyn u korodhay tan iyo 1993-kii. Maanta, Buuhoodle waxay leedahay nidaam is-gaarsiin casri ah sida taleefannada gacanta, telefoonada gacanta, iyo internetka. Waxay kaloo leedahay hudheel casri ah, iyo sidoo kale isbitaal cusub oo la dhisay 2008-dii. Waxaa intaa dheer, shabakad biyo bixin ah ayaa la dhisay 2010 oo ay sameeyeen dadka degaanka ah ee degaanka.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Buuhoodle&oldid=212634"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 22 Juun 2021, marka ee eheed 08:54.